Ramaphosa: Mashaakilka kufsiga waa in xaalad degdeg ah loo aqoonsado – hareerley News
Madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin adadag oo ka dhan ah dambiyada kufsiga la xiriira, ku dhawaaqitaankan ayaa imaanaya iyadoo qaybo ka mid ah dalkaas ay ka taagan tahay caro ka dhalatay dilal dhawaan loo gaystay dumar.
Ramaphosa oo khudbad aan la sii qorshayn u jeediyay kumannaan ruux oo isugu soo baxay bannaanka dhismaha baarlamaanka ayaa sheegay in la joogo wakhtigii ay dawladdiisu qaadi lahayd tallaabooyin degdeg ah oo ay wax uga qabanayso kufsiyada iyo dilalka dumarka loo gaysanayo.
Koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan rabshadaha ugu badan ee dumarka lagu bartilmaameedsado.
Maalmihii u dambeeyay kumannaan dumar ah ayaa baraha bulshada adeegsanayay iyaga oo dawladda ka dalbanayay in ay ficil samayso, waxayna astaan ka dhigteen #AmINext ama ma anigaa ku xiga.
Ugu yaraan 137 dambi oo galmo la xiriira ayaa maalin walba ka dhaca Koonfur Afrika, badankooduna dumarka ayay ku dhacaan, sida ay muujinayso xogta rasmiga ah ee dawladda.
Ramaphosa ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqo, balse ma cadda sida arrintaasi ay gacan uga gaysan doonto wax ka qabashada dhibaatada ka taagan dalkiisa. Xukunkii midab takoorka markii uu jiray xaaladda degdegga ah waxaa ka mid ahaan jirtay bandaw iyo in la mamnuuco in dad badan isu soo ururaan.
Balse marka ay timaaddo dhibaatada dumarka lagu hayo khuburadu waxay sheegayaan in inta badan ay is yaqaannaan dhibanaha iyo qofka dhibka gaysta.
R/W kheyre Oo kulan la Qaatey Beesha Caalamka.
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre iyo mas’uuliyiin ka socota midawga Afrika, IGAD, Qaramada Midoobay, Midawga Yurub, Turkiga, Ingiriiska, iyo Mareykanka, ayaa Mareegta Internet-ka ku yeeshay kulan heerkiisu sarreeyo oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya. Kulanka ayaa looga dooday horumarka ay ku tillaabsatay dowladda Soomaaliya, caqabadaha jira iyo tillaabooyinka xiga ee dib-u-kabashada dalka. […]
Wasiirka Kaluumeysiga Oo Dalab Xasaasi ah hordhigey hogaamiyaha Puntland
Posted on March 17, 2020 March 17, 2020 Author Hareerley News
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda ee xukuumadda Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinayey shirweynaha ka socda Garoowe ayaa dalab xasaasi ah hordhigay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee ka qeyb galaya shirweynahaasi ayaa ka dalbaday Deni inuu gogol u dhigo madaxa dowladda federaalka iyo […]
Dowlada Itoobiya Oo ka hadashey Eedeymihii loo Jeediyey ee Faragalinta Soomaliya
Posted on December 1, 2019 December 1, 2019 Author Hareerley News
Maalmii la soo dhaafay waxaa taagnaa Warar ku saabsan in Dowladda Itoobiya ay faragelin toos ah ku heyso Arrimaha Siyaasada Soomaaliya gaar ahaan inay u adeegsaneyso arrimaha Siyaasadda Ciidamo aan kamid aheyn Holwgalka AMISOM,hayeeshee Dowladda Itoobiya ayaa Warkaasi beenisay. Safiirka Itoobiya u fadhiya Nairobi Meles Alem oo Arrimahaasi wax laga weeydiiyey ayaa sheegay in Dastuurka […]
Koonfur Afrika oo xirtay safaaradeeda Nigeria